Raysal Wasaaraha Somalia Oo Ka Hadlay Maydadka Dhalinyaro Si Xun Loogu Xasuuqay Muqdisho Oo Xusuusiyay Bulshada Dhacdooyinkii Xasuuqa Ee Xukuumaddii Milateriga Ahayd – Araweelo News Network (Archive)
Raysal Wasaaraha Somalia Oo Ka Hadlay Maydadka Dhalinyaro Si Xun Loogu Xasuuqay Muqdisho Oo Xusuusiyay Bulshada Dhacdooyinkii Xasuuqa Ee Xukuumaddii Milateriga Ahayd
Muqdisho(ANN)Xukuumadda Somalia ayaa markii ka hadashay Xasuuq lagu eedeeyay hawlgalo ay ciidamada Nabadsugida ee Muqdisho ku fuliyeen kooxo dhalinayaro ah oo la ogaa iyagoo xidhan, balse shaaracyada magaalada lasoo dhigay maydadkooda sadexdii maalmood ee
u danbeeyey . Kadib markii si foolxun loo laayay.
Raysal wasaaraha Somalia Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo maanta gelinkii dambe saxaafadda kula hadlay Muqdisho ayaa sheegay in ay ka war hayaan dilalka Muqdisho, islamarkaana ay guddi baadhitaan dheeraad ah sameeya u saareen dhacdadaa, wuxuuna isagoo arrintaa ka hadlaya yidhi, “waxbadan waan ka ognahay xog dheeraad ahna waan raadinaynaa illaa Salaadada soo socota aan kulan deg deg ah ka yeelano”.
Ra’iisal Wasaare Saacid waxa uu xusay in golihiisa Wasiiraddu si adag uga doodeen, falalka dilalk ah, oo goobo kala duwan ka dhacay kuwaas oo lagu dilay dhalinyaro, wuxuuna xusay in arrintaasi ay aad uga xunyihiin, ayna u saareen guddi ka kooban saddex Wasaaradood, oo kala ah, Wasaaradda Garsoorka, Wasaaradda A. Gudaha iyo Wasaaradda Warfaafinta.
“Guddigan waxaan ka sugeynaa warbixin rasmi ah, oo mida haatan aanu heyno ka badan, waxaana si gaar ah u iclaaminay shir aan caadi aheyn oo arrintan looga hadli doono oo golaha Wasiiradu yeelan doonaan maalinta Talaadada ee soo socota” ayuu yiri Mudane Saacid oo xusay in muhiimada dowladdu tahay illaalinta xaquuqda aadanaha iyo xorriyatul qowlka.” Ayuu yidhi Raysal Wasaare Saacid.
Dhinaca kale Muqdisho waxaa ka socda magaalada Muqdisho kulamo gooni gooni ah oo ay yeelanayaan qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka iyo Siyaasiyiin, kuwaas ka arrinsanaya sida laga yeelayo dhacdooyinka dilalka oo lagu sifeeyay kuwo la mid ah xasuuqii ay samaynjirtay dawladii Milateriga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre, iyadoo dad badan dhacdooyinkani xusuusiyeen xasuuqii xeebta Jaziira ee sideetanaadkii.
Nabadoon Axmed Diiriye Cali oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee Muqdisho ayaa ka hadlay dhacdadaa, wuxuuna wax laga xumaado ku tilmaamay Dhalinyarada Xabsiga lagala baxay ee Dowladdu si xun ugu dhex dishay Magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay arrintaasi Fadeexad cad ku tahay Dowladda uu Hogaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud.
“Iyadoo howlgal uu socda in qof la dilaa waa suurtagal. qof in maxkamad lasaaro oo dil lagu xukumo waa suurtagal, laakin in qof lasoo qabto oo laxidho kadibna xabsi lagala baxo oo la dilo waa fal mooryaanimo” ayuu yidhi Oday Axmed Diiriye.
Dhacdooyinka dilallka ah ayaa lagu eedeeyay in ay fuliyeen saraakiisha Sirdoonka ee nabadsugida, kuwaas oo u dhaqmaya qaabkii nidaamkii dawladii Milateriga ahayd ee Somalia oo sidan oo kale dadka habeenkii guryaha loogala bixi jiray. Kadibna lagu war heli jiray in la laayay, waxaana dhacdooyinkan ka mid ah raga lagu eedaynayo Khaliif Ere goo ka mid ah saraakiisha Nabadsugida, kaas oo dhalinyarada la helay Maydadkooda oo qaarkood ay wada sawiran yihiin sarkaalkaa, iyadoo dhalinyarada qaarkood yihiin kuwo dhawr bilood ka hor kasoo goostay kooxda Al-shabaab, kuwaas oo dib u bilaabay noloshooda iyo inay waxbartaan, balse guryohooda lagaga baxay oo ciidamada Nabadsugidu xabsiga u dhigeen. Kadibna shaaracyada magaalada maydadkooda.
Published March 14, 2013 By info
Pursuit of hackers who stole Michelle Obama credit reports widens
Turkish Foreign Minister Davutoğlu meets with Somaliland leader, vows to step up aid